एमाले विवाद मिलाउन राष्ट्रपति सक्रिय, भीम रावलसँग के भयो कुराकानी ? - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
एमाले विवाद मिलाउन राष्ट्रपति सक्रिय, भीम रावलसँग के भयो कुराकानी ?
आन्तरिक विवादमा रुमलिएको नेकपा एमालेले लामो समयसम्म समाधान नपाइरहेको अवस्थामा विवाद मिलाउने राष्ट्रपति विद्या भण्डारी सक्रिय भएकी छिन् । राष्ट्रपतिकै आग्रहमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावल हिजो साँझ शीतलनिवास पुगेका थिए । राष्ट्रपति भण्डारी र रावलबीच लामो छलफल भएको स्रोतले बतायो ।
पार्टी एकताको लागि माधव समूहले ओली समूहलाई दुई दिनको अल्टिमेटम दिएपछि राष्ट्रपति भण्डारी सक्रिय बनेको चर्चाबीच उनीहरूबीच भेटवार्ता बहेको हो । राष्ट्रपति भण्डारी यसअघि पनि पटकपटक पार्टीको विवाद मिलाउन सक्रिय बन्दै आएकी छन् । शनिबार साँझ करिव ५ बजे शीतलनिवास पुगेका रावल करिव बजे ८ बजे बाहिरिएका थिए ।
स्रोतका अनुसार माधव नेपाल समूहलाई सरकारमा जानबाट रोक्न र पार्टीको विवाद मिलाएर अगाडी बढ्न राष्ट्रपतिले आग्रह गरेकी छन् । छलफलमा राष्ट्रपतिले एमाले माधव समुहको पछिल्लो केन्द्रीय कमिटी बैठकबारे जानकारी लिएको स्रोतको दाबी छ ।
साथै भण्डारीकै आग्रहमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठक रोकेर विवाद समाधानको पहल गर्ने भएका छन् । नेपाल समूहले ओलीलाई बैठक र पार्टी सदस्यता नविकरण रोकेर वार्ताको वातावरण बनाउन आग्रह गरेको थियो ।